Shirka Mudullood iyo khilaafka Doorashadda oo Muqdisho looga hadlay | Keydmedia
Shirka Mudullood iyo khilaafka Doorashadda oo Muqdisho looga hadlay
Sidoo kale, saddexda Mas’uul isla eegay shirka Mudullood uga socda Caasimadda, iyagoo rajeeyay inuu mira-dhal noqdo, islamarkaana lagu gaaro go’aamo wax dhisaya oo masiir dalka ku saabsan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Cali Mahdi, oo Madax kasoo noqday Soomaaliya ayaa kulan gaar ah ku yeeshay Muqdisho, sida ay maanta shaacisay Madasha Xisbiyada Qaran.
Kulanka oo ka dhacay guriga Cali Mahdi ayaa wuxuu ahaa mid is-xog-wareysi ah, oo mas’uuliyiinta isla gorfeeyay xaaladda dalka uu marayo iyo arrimo kale oo ay ku jiraan Shirka Mudullood iyo doorashadda.
Waxay ka digeen dhibaato ka timaada dib u dhigista doorashadda, iyagoo ku aaqay in la helo talo mideysan oo lagu waajaho arrintaas, si looga baaqsado fowdo iyo dagaal ka dhaca wadanka Soomaaliya.
“Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waxay la kulmeen Madaxweynihii hore Cali Mahdi, waxayna kawada hadleen arrimihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, sida xiisada ka dhalatay doorashadda iyo sida dowladda uga caga-jiideyso inay waqtigeeda ku qabato,” ayaa lagu yiri qoraalka Madasha.
Madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeeyay inuu ku tumanayo dastuurka isaga iyo Baarlamaanka lagu soo doortay, kadib markii 4 kadib diiday inuu qabto doorasho waqtigii loogu tala-galay, November 2020.
Hoos u dhac dhaqaale, sicir barar, amni xumo iyo khilaafyo siyaasadeed ayaa laga dhaxlay hogaanka Farmaajo, iyadoo laga cabsi qabo inuu dagaal ka dhaca dalka marka mudo-xileedkiisa dhamaado, oo uu doorasho qaban waayo.